Saamaynta Abaarta - BBC News Somali
5 Luulyo 2011
Image caption Ilma yar oo macluulsan
Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee Kenya waa bux-dhaafeen, oo iyagoo la ciir-ciiraya qaxootigii hore, ayaa tan iyo bishii June maalin walba waxaa soo galayey ilaa kun qaxooti ah oo ka soo qaxay abaarta iyo collaada Soomaaliya.
Dhadhaab waxaa ku yaal 3 xero qaxooti, oo waaweyn oo noqotay xerada qaxooti ee u weyn adduunka berigii hore, waxaa loogu talogalay qaxooti ilaa 90 kun qof ah oo ka soo cararay Soomaaliya, Sudan iyo dalal kale.
Hadase, waxaa ku ool 4 jibbaar tiradii 1990s loo qorsheeyey in ay qaado, oo ay ku noolaadaan Dhadhaab.
Degaanka ay xeryuhu ku yaalaan ee woqooyi-bari Kenya dadka ku nool, waxay ka cawdaan sida qaxootiga faraha badan u saameeyey noloshooda.
Hadda, oo dhulkaas abaar xoog eh ay ka jirto, dadka degaanku waxay ku eedeynayaa dawladda Kenya iyo hay'adaha gargaarku in aysan wax ka qaban dhibaatada bani-aadaminimo ee iyagana haysata.
Wariyaha BBCda Maxamuud Ali oo maalmahan joogay Dhadhaab, ayaa tegay degaanada u dhow dhow xeryaha qaxootiga oo warbixintan nooga soo diray.
Maxamuud Cali, ayaa sheegay in duleedka xeryaha ay dadku degaanka laftooda dhibaatada abaartu ay xoog u saamaysay. Dadka ayuu ka hadlay in dhibaatada abaartu ay u horseeday in ay hadba naftooda ula cararaan meeshii ugu dhow ee biyo loogu sheego.
Maqal Muhiimad caynkee ah ayey leedahay booqashada Madaxweyne Farmaajo ee dalka Jabuuti?
Muhiimad caynkee ah ayey leedahay booqashada Madaxweyne Farmaajo ee dalka Jabuuti?
Maqal Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inuu biyaha webiga Shabeelle ku soo fasaxay deegaanno Qoryooley ka tirsan
Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inuu biyaha webiga Shabeelle ku soo fasaxay deegaanno Qoryooley ka tirsan
Maqal Wareysi ku saabsan guusha Ilhaan Cumar
Wareysi ku saabsan guusha Ilhaan Cumar
Maqal Ilhaam Cumar oo ku soo baxday isreebreebka Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka
Ilhaam Cumar oo ku soo baxday isreebreebka Xisbiga Dimuqraadiga Mareykanka
Maqal Maxaa keenay shilalka kusoo badanaya jidka u dhexeeya Hargeysa iyo Wajaale?
Maxaa keenay shilalka kusoo badanaya jidka u dhexeeya Hargeysa iyo Wajaale?
Maqal Maamulka Dekadda Berbera oo gaashaanka u daruuray cabashada dadka dekaddaas wax kala soo dega
Maamulka Dekadda Berbera oo gaashaanka u daruuray cabashada dadka dekaddaas wax kala soo dega